Daawo muuqaalka: Raisul wasaare Saaciid oo lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe |
Daawo muuqaalka: Raisul wasaare Saaciid oo lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe
Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Gen.Cabdisamad Cali Shire ayaa maanta garoonka diyaaradaha Garowe ku soo dhoweeyey wafdi ka socdey DF Somalia uuna horkacayey raysal wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ‘Saacid’.
Wasiiro ,Xildhibaano ,dhalinyaro ,haween iyo dadweyne kale ayaa ku soo dhoweeyey raysal wasaaraha DF Somalia oo ay wehelinayeen masuuliyiin ka socdey golayaasha DF Somalia oo watay boorar muujinaya inay taageersanyihiin nidaamka Federaalka ah.
Dhinaca aqalka Madaxtoyada Garowe ayaa loo soo galbiyey oo uu kula kulmey madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxman Maxamed Farole.
ka dib qado sharaf ka dhacdey Madaxtoyada Garowe ayay saxaafada wadajir ula hadleen madaxda DF Somalia iyo mamulk Puntland,waxana uu ka sheekeeyey madaxweyne Farole kaalintii ay Puntland ka soo qaadatay hirgelintii geedi socodka RoadMapka oo lagu dhisay xukuumadda haatan jirta.
Puntland inay marweliba u taagantahay midnimada umadda Soomliyeed ayuu ku ceshay Farole oo sheegey inay wadahadal la gali doonaan DF Somalia.
Dhankiisa ayuu ka mahadceliyey qaabka loo soo dhoweeyey raysal waasaraha Somalia oo sheegey inuu ku faraxsanyahay booqashada uu ku yimid Puntland.
Rajo wanaagsan ayuu ka muujiyey inay guul ku dhamaato wadahadalka ay la galayaan Puntland oo uu uga mahadceliyey siday uga qayb qaadato nabad ku soo dabaalida Somalia.
Saacid Faarax Shirdoon ayaa markii ugu horeysey maanta soo gaarey deeganada Puntland tan iyo markii uu xafiiska yimid October 2012 ,waxana lagu wadaa maalmaha soo socda inuu kulamo kala duwan la yeesho madaxda iyo masuuliyiinta dowladda Puntland.
halkaan hoose ka daawo warbixintaano oo dhameystiran